National Power News:: शेरबहादुर तामाङ दम्पत्ति ओली क्याम्पमा प्रवेश गर्ने ! National Power News:: शेरबहादुर तामाङ दम्पत्ति ओली क्याम्पमा प्रवेश गर्ने !
शेरबहादुर तामाङ दम्पत्ति ओली क्याम्पमा प्रवेश गर्ने !
Saturday, February 20, 2021 National Power
काठमाडौं- नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता शेरबहादुर तामाङ र प्रदेश सांसदसमेत रहेकी उनकी श्रीमती उषाकला राई नेकपा ओली समूहमा प्रवेश गर्ने भएका छन् । आज विराटगनरमा हुने आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारेमा घोषणा गर्ने बुझिएको छ । यसअघि पनि तामाङ ओली क्याम्पमा गएका थिए ।
पछि उनी नेकपा दाहाल-नेपाल समूहमै प्रवेश गरेका थिए । तामा ङले संसद पूनःस्थापना हुने सम्भावना नभएको भन्दै बरु शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको माग गरेका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।